Nkwakọ ngwaahịa nke akwụkwọ akụkọ anọ dị mkpirikpi n'okpuru otu nche anwụ okike agaalala ogologo ụzọ na a Stephen King na ọ bụrụ na enweghi akụkọ ndị ọzọ nke ọ ga -eji kpuchie oge ya enwetara ruo akụkụ nke anọ ma ọ bụ ekwensu n'onwe ya, ọ na -ejikwa ike ya nke ukwuu jupụta ike ya.
Ana m ekwu na ngwugwu anọ site anọ maka ngwongwo Vivaldian ya Oge anọ ụdị gbara ọchịchịrị. Akụkọ mkpụmkpụ anọ ahụ "Olile anya, oge opupu ihe ubi ebighi ebi", "Oge ure nke ire ure", "Mgbụsị akwụkwọ nke ịdị ọcha" ma ọ bụ "akụkọ oyi" ha bụ okpokolo agba nwere ikike dị elu, ha niile pụtara nke ọma ka ahazie ya dịka ọrụ nnwere onwe. Mana Eze ahụ ọ bụ ihe ọzọ ...
N'oge a, ọ bụrụ na nri ihe okike dabere na ike dịpụrụ adịpụ mana ike siri ike na-achị anyị, nke ahụ nwere ike na-eme atụmatụ itinye aka ọjọọ (na ihe omume nke 2020 a m na-ezo aka), n'ọnọdụ ahụ. Stephen King na-eme ka mkpọ kwesịrị ekwesị ma na-atụba wick na nchịkọta na-enye nsogbu karị. Anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọgụgụ isi naanị ma ọ bụrụ na otu ụbọchị ọ ga-agbapụ na nkà ya na-enweghị ngwụcha.
Ka akụkọ a na -agba ọbara na ihe ike, ka ọ na -adọta mmasị ndị mmadụ: "Iwu ọbara." Nke a na -agụ akwụkwọ akụkọ ga -eme Holly Gibney, onye nyocha Bill na -ekwu nyefere ụlọ ọrụ ya bụ Finders Keepers, yana otu n'ime agwa kacha amasị ndị na-akwado ya Stephen King, na-enwe mmasị na mgbuchapụ na Albert Macready High School wee mechie akụkọ ahụ. Oge a ọ ga-alụ ọgụ megide ihe ọ kacha atụ egwu… na oge a naanị ya.
Agbanyeghị Holly, onye pụtaralarị na trilogy "Bill Hodges" na n'ime Onye obia, kpakpando n'okwu ikpe naanị ya nke mbụ na akụkọ na -enye aha maka mpịakọta a, akụkọ atọ ọzọ mejupụtara akwụkwọ a. Na ekwentị “Maazị Harrigan” ọbụbụenyi dị n'etiti mmadụ abụọ nọ n'afọ ndụ dị iche na -adịgide karịa ihe na -enye nsogbu. "Ndụ nke Chuck" na -enye anyị echiche mara mma banyere ịdị adị nke onye ọ bụla n'ime anyị.
Na "oke" onye odee na -achọsi ike na -eche ihu nke oke ọchịchọ.
Akụkọ anọ nke Stephen King ọzọ na-eju ndị na-agụ akwụkwọ anya ma na-eduga ha n'ebe ndị na-akpali mmasị yana egwu dị egwu.
Ị nwere ike ugbu a zụta olu «Ọbara bụ onyeisi», si Stephen King, Ebe a:
Tags Novelties na akwụkwọ akụkọ, Akwụkwọ akụkọ egwu, Stephen King